विदेशी पैशा खाएर राजालाई गा ली गर्ने हक कसैलाई छैन , राजाले पैसा खाएर देश वेचेको इतिहास छैन | समर्थन गर्ने सबैले से-यर गरौं ल – ईमेची डटकम
विदेशी पैशा खाएर राजालाई गा ली गर्ने हक कसैलाई छैन , राजाले पैसा खाएर देश वेचेको इतिहास छैन | समर्थन गर्ने सबैले से-यर गरौं ल
कालापानी र लिपुलेक भारतको नक्सामा पूर्वी मेचीमा यत्रो क्षेत्र मिचेको खुलासा ।।
नेपाललाई चाहिएको राजनीति नेताहरुले गरेको भए ५०–६० जना सांसदले हाम्रो संसद चल्न सक्छ । पश्चिमाहरुले कुनै बदलाको लागि नेपालमा थोपरेको व्यवस्था हो यो । अहिलेको व्यवस्था नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था होइन । नेपाली जनताले झन्डै हजारको हाराहारीमा सांसद पाल्छौ भनेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरेदेखि नै नेपाल उनीहरुको सत्रु राष्ट्र बन्दै आएको छ ।
यसकारण उनीहरु जहिले पनि हामीलाई बिथोल्न चाहन्छन् । अहिलेको परिवेश भन्ने हो भने त्यो सम्भव पनि भयो । संघीयता थोपरिएको हो । संघीयता नभएर देश अविकसित भएको होइन । ७५ जिल्लाको विकास गर्ने पैशा त यिनै नेताहरुले थुपारेर राखेका छन् । यिनको कठालो समातेर सोधौं त पैशा कहाँबाट आयो भनेर । सबै थाहा हुन्छ । संघीयताका लागि मुलुक अगाडि बढिसक्यो । तर धान्न नसक्ने व्यवस्थातिर गयो । अहिले जुनसुकै बच्चा जन्मियोस, जन्मनासाथ उसको थाप्लोमा १४ हजार ऋण हुन्छ ।
अहिलेको व्यवस्थाले द्वन्द्व समाधान होइन निम्त्याउने खतरा देखेको छु । चुनावमा देश गएको छ । झोलेहरुका लागि यो ठिक मौसम हो । चुनाव भनेको पैशा कमाउने बाटो पनि हो । एउटा सिंगो नेपाल चलाउन नसक्नेले सात प्रदेश कसरी चलाउँछन ? मुख्य कुरा यो हो । अर्को कुरा के छ भने तराई टुक्रा पार्छु भन्नेलाई यिनीहरुले केही गर्न सकेनन् ।
बाबुराम भट्टराई जस्ता नेता भएको देश हो । सिके राउत पक्राउ पर्दा उनी मानवअधिकारवादीको पछि लागेर राउतलाई छाड्नु पर्छ भन्दै जाने मानिस हुन् उनी । अहिले ज्ञानेन्द्रले केही बोल्दा उनी किन पाँच हात उफ्रिन्छन ? यो देशलाई जोगाउँ भन्दा यहाँका केही मानिसहरु उफ्रिन्छन् । देशको माया गर्ने मान्छे धेरैलाई बिझाउँछ ।
यो संविधान नागबेली जस्तो भएको छ । पश्चिमाको रुचीले संविधान बनेको छ । कांग्रेस, एमालेलाई मन मनमा घाँडो भएको छ । यो संविधान यिनीहरुले लेखेका होइन । तर पश्चिमाको रुचीमा आएको संविधान यिनीहरु जसरी भए पनि लागू गर्न खोज्दै छन् । उता भारतलाई पनि नेपालको संविधान चित्त बुझेको छैन । नेपालमा हिन्दू धर्म मासिएला भन्ने अहिलको संस्थापनको चिन्ता देखिन्छ । नेपालमा क्रिष्चियन बढ्दा चीन पनि दुःखी हुन्छन् ।
तिब्बत नेपाल सीमामा क्रिष्चियन बढ्दा उनीहरुलाई दुःख दिन्छन् । नेपाल टुक्रा पार्न, धर्म मास्न खटिएका विदेशीका खेतालाहरुले मेरो नाक कति लामो, मगरको कति छोटो भनेर विषय उचाल्छन् । बुद्धिजीवी भनाउँदाहरुले प्रपोगन्डा गर्छन् । पाँच सात जना दलाल विदेशी एजेन्ट (लोकराज बरालसहित)को त मैले पहिले नाम पनि लिएको छु ।
हाम्रो देशमा राजाले कुनै गल्ति गरेका छैनन् । ज्ञानेन्द्रका छोरा पारसरले यसो गरे र उसो गरे भन्छन् । पारसले भन्दा पनि प्रचण्डका छोरा प्रकाशले केसम्म गरेका छन् आफै बुज्नुहोस । राजनीति भनेको सधै सोचेको जस्तो हुँदैन । राम्रो गर्छु भन्दा कहिले काही गल्ति हुँदैन । ज्ञानेन्द्रले कहिले देश टुक्रा पार्ने कुरा गरेनन् । उनका पूर्खाले गरेनन् । म नेपाली सेनामा काम गर्ने बस्नेत परिवारको १२ औं पुस्ताको मान्छे हो ।
म भन्दा माथि मेरा १२ पुस्ताका पुर्खाले नेपाली सेना भएर देशका लागि लडे मरे । त्यही खुन मभित्र पनि छ । नेपाल टुक्रा पार्छु भन्नेहरुलाई म पहिले टुक्रा पार्छु । भारतमा तालिम गराएर नेपालमा बम पड्काउने काम भयो । अहिले देश ‘न बाच्छाको मुखमा न ढुंग्रो’को स्थिति भएको छ । एनजिओको, विदेशीको पैशा खाएर देश टुक्रा पार्न खोज्नेहरुलाई हामीले चिन्नु पर्छ